Manchester United Oo Bartilmaameyd Lama Filaan Ah Ka Dhigatay 26 Jir Khadka Dhexe Ugu Ciyaara Ac-milan
HomeHoryaalka IngiriiskaManchester United oo Bartilmaameyd lama filaan ah ka dhigatay 26 jir khadka dhexe ugu ciyaara Ac-milan
December 15, 2020 Horyaalka Ingiriiska, Horyaalka Italy, Wararka Ciyaaraha Maanta, Wararka Wargeysyada 0
Madaxa AC Milan Paolo Maldini ayaa ku adkeysanaya in kooxaha culus ee Serie A aysan ku deg degin xalinta mustaqbalka bartilmaameedka khadka dhexe ee Manchester United Calhanoglou.
Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Turkiga ayaa ka soo muuqday in ka badan 100 kulan oo uu u ciyaaray kooxda reer Talyaani tan iyo markii uu ka soo dhaqaaqay kooxda Bayer Leverkusen sanadkii 2017-kii wuxuuna door muhiim ah ka ciyaaray bilowgii cajiibka ahaa ee kooxda Stefano Pioli ay ku bilaabatay xilli ciyaareedka cusub.
Waxaa uga harsan kaliya lix bilood qandaraaskiisa haatan wuxuuna xor u yahay inuu heshiis horudhac ah la galo koox kale oo reer yurub ah bisha soo socota waxaana si aad ah loola xiriirinayay inuu u wareegayo Premier League.
Milan ayaa sidoo kale rajeyneysa inay heshiis cusub ku xirto goolhaye Gianluigi Donnarumma, laakiin halyeeyga kooxda Maldini ayaa ku adkeysanaya in Milan aan lagu cadaadin doonin inay dhameystirto heshiiska labada ciyaaryahan.
Maamulaha farsamada ee Rossoneri ayaa yidhi: “Ma jiro wax lagu degdegayo, waxaa jira ballamo shirar ah.”
Kooxda Manchester United ayaa hada fursad u heesata in ay xidigan lasoo wareegto.